Telo na efatra andro aorian'ny valim-panadinana no hatao izany, ka ireo mahazo salan’isa na « moyenne” 9 no ho mihoatra, dia afaka ny hanao an’io “2ème session” io. Andrasana ny fanehoan-kevitra ataon’ireo mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny fampianarana, toa an-dry zareo mpampianatra mpikaroka (SECES) izay nitaky ny hanafoanana ny bakalorea sy hamerenana izany. Tany amin’ny Repoblika faharoa no nisian’ny tahaka izao. Nakana ny hevitry ny mpanabe sy mpiantsehatra eo amin’ny tontolon’ny fampianarana ve io ? Laza adina avy aiza no hanadinana ? Efa-bolana mantsy ny fenitra fanomanana azy ireny. Roa ny laza adina fiandry, ka ny voalohany dia efa nisy nampiasaina noho ny fisiana fivoahan’ny laza adina nialoha ny fotoana. Inona no antoka amin’ny tsy mbola niparitahan’ny laza adina faharoa ? Ho hita eo fa mitohy hatrany aloha ny fitaintainana eo amin’ny mpianatra eo anatrehan’izao toe-draharaha izao. Nipatrapatraka hatrany ny fampanantenana, toy ny mahazatra. Hisy oniversite maromaro hosokafana manomboka amin’ity taona ity. Ireo ankizy rehetra nahazo “mention” dia hahazo vatsim-pianarana dia hianatra ao anatin’ny oniversite vao hatsangana, hoy ny filoha Rajoelina.Zava-dehibe ho ana firenena iray ny fampianarana sy fanabeazana, ary mamaritra ny ho avin’ny firenena.Tsy misy firenena mandroso izany raha tsy ampy sy araka ny zava-misy ao aminy ary mifandraika ihany koa amin’ny fivoaran’izao tontolo izao ny fampianarana azon’ny vahoakany.Niaraha-nahita iny ny voka-panadinana ratsy tamin’ny BEPC, tonga indray izao ny Bakalorea dia olana be matoa miditra an-tsehatra hatramin’ny filoham-pirenena..asa re izay ho tohiny !